Kormeer Kedis: Madaxweyne Xigeenka Somaliland Oo Ku Hungoobay Xarumaha Iyo Xafiisyada Dawladda Qaarkood | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Madaxweyne Xigeenka Somaliland C/raxmaan Ismaaciil Saylici ayaa markii Labaad Todobaadkan Gudihiisa kormeer kedis ah kusoo maray qaar ka mid ah Xafiisyada iyo dhismayaasha Hay’addaha Dawlada, iyadoo dhisamayaasha wasaaraddaha qaarkood iyo xafiisyada Wasiiradaha
laga maqnaa oo aanay wax shaqo ahi ka socon.
Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland waxa uu kormeerkiisa saaka bilaabay qiyaastii Abbaaro 7:25 daqiiqo, wuxuuna booqashada kormeerkiisa ka bilaabay Wasaaradda Dhalinyarada, Ciyaataha iyo Dhaqanka, taas oo xiligaa uu Wasiirka Wasaaraddaa Cabdi Siciid Faahiye ka maqnaa xafiiska, balse waxa halkaa warbixin ku siiyay Madaxweyne xigeenka Agaasimaha Guud ee wasaaradaa. Mustafe Maxamuud Qodax oo ku sugnaa xafiiskiisa, wuxuuna ka waramay qorsheyaasha waxqabad ee wasaaraddaa iyo dedaalka ay wasaarad ahaan ugu jiraan hawsha ay qaranka u hayaan.
Madaxweyne Ku Xigeenku waxa kale oo uu kormeer ku soo maray Hay’dda Abaabul ka-saarka Qaranka ee loo soo gaabiyo (NDC) , taas oo xiligaa aanay cidna joogin masuuliyiin iyo shaqaale marka laga reebo gabadh qudha oo ku sugnayd mid ka mid ah xafiisyada Hay’adda NDC.
Mr. C/raxmaan Ismaaciil Saylici waxa uu u gubay wasaarada xanaanada Xoolaha Somaliland, taas oo xiligaa xafiisyadeeda gabi ahaanba albaabadu u xidhnaayeen isla markaana aanay ka socon wax shaqo ahi marka laga reebo hal xafiis oo keligii funaa. kadibna Madaxweyne xigeenku wuxuu booqday dhismaha Wasaaradda Maaliyada ee kasoo horjeeda Wasaaradda Xannaanada Xoolaha, iyadoo ay xiligaa xafiisyada ka maqnaayeen Wasiirka wasaaradda Maaliyada Somaliland Maxamed Xaashi Cilmi iyo Wasiir Ku Xigeenka wasaaradaasi Warsame Siciid Cabdi, balse ay xafiisyada qaarkood furnaayeen.
Sidoo kale Madaxweyne Ku xigeenku waxa uu kormeerkiisa ku tagay Wasaaraddaha Warfaafinta, Macdanta iyo biyaha, Wakaalada qurbo-jooga iyo Hay’adda maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaanu halkaasi warbixin kaga dhegaystay masuuliyiinta wasaaraddahaa oo xog waran kooban ka siiyay shaqada ay bulshada u hayaan, wuxuuna ku dardaaray Madaxweyne Ku Xigeenku masuuliyiintaa inay shaqada iyo adeega ay u hayaan bulshada ilaaliyaan oo ay gutaan xilkooda.
Todobaadkii hore oo uu sidan oo kale kormeer booqasho kedis ah ku maray xafiisyada dhawr iyo toban Hay’addood oo xarumaha dawladda ah, kuwaas oo intooda badan haya’ddaha Madaxweyne-ku-xigeenku booqday uu kula kulmay masuuliyiinta ka shaqaysa oo xaadir ku ahaa wakhtigaa xafiisyadooda, marka laga reebo labada masuul ee Hantidhawrka Guud Maxamuud Aw Cabdi iyo Guddoomiyaha Haya’dda Shaqaalaha oo aan iyagu xaadir ku ahayn xafiisyadooda. Laakiin booqashada maanta ee Madaxweyne xigeenka ayaa ku hungoobay xafiisyada masuuliyiinta qaarkood iyo gebi ahaanba dhsimayaasha xarumahaa oo aan cidiba kasoo xaadirin shaqaale iyo masuuliyiin kale toona.